कलेजोको समस्याले पनि पाइल्स « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७४, २१ असार बुधबार ०६:५६ मा प्रकाशित
दिसा गर्ने ठाउँ (मलद्धार) का नसाहरु बिस्तारै फूलेर हुने मासुको डल्लोको आकारलाई पाइल्स भनिन्छ । यसले मलद्धारबाट निस्कने दिसाको बाटोमा अवरोध गर्छ र व्यक्तिलाई सत्रुले दिएको जस्तो पीडा दिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा हेमोरोइड्स र आयुर्वेदमा अर्स भनिन्छ । यो गुदद्धार अन्तर्गत हुने रोग हो ।
पाइल्स हुनमा आरामदायी जीनशैली, फास्टफूड र जंकफूडको अत्यधिक सेवन, कमजोर पाचन शक्ति, कलेजोसम्बन्धि पुराना रोग आदिलाई लिइन्छ । फास्टफूड, जंक फूड आदिले पेटको अग्नी (ताप) लाई कम गरिदिन्छ । पेटमा अग्निको मात्रा घटेपछि कब्जियत हुन्छ र दिसा गर्दा अत्यधिक बल गर्नुपर्छ । अत्यधिक बलका कारण मलद्धारका नसाहरु फूलेर पाइल्स रोगको जन्म हुन्छ । समयमा खाना नखाने र एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बसिरहनाले पनि पाइल्सको समस्या हुनसक्छ । पेट र कलेजोसम्बन्धि पुराना रोगले पनि पाइल्स गराउनसक्छ ।
पाइल्समा वंशाणुगत भूमिका कतिको हुन्छ ?
पाइल्स हुनमा वंशाणुगत कारण पनि हुन्छ । तर जीवनशैली र रहनसहनले सबैभन्दा धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । पाइल्स बच्चादेखि बृद्धबृद्धासम्मका जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ । तर युवावस्थाका व्यक्तिलाई धेरै हुने गरेको पाइन्छ ।
गर्भवती भएको बेला कतिपय महिलाहरुलाई फिसरको समस्या हुनसक्छ ।
कलेजोको समस्याले कसरी पाइल्स गराउनसक्छ ?
कलेजो महत्वपूर्ण अंग हो । कलेजोमा कुनै रोग लागेमा पाचनप्रणालीमा ¥ह«ास आउँछ । आवश्यक मात्रामा पाचन रस उत्पादन हुन सक्दैन र विभिन्न पेटसम्बन्धि रोग उत्पन्न हुन थाल्छन् । साथै पेटको अग्नीशक्ति कमजोर भई कब्जियतको समस्या देखिनसक्छ । यसरी कब्जियतका कारण ७५ प्रतिशत पाइल्सको समस्या देखिने गरेको पाइन्छ ।
लक्षण कस्तो देखिन्छ ।
पाइल्सलाई सामान्यतया ४ भागमा विभाजन गरी लक्षण छट्याउने गरिएको छ । पाइल्स बाहिरी र भित्री दुवै प्रकारको हुनसक्छ ।
यो अवस्थामा दिसा बस्दा कहिलेकाँही रगत बग्ने, चिलाउने हुनसक्छ । समयमै चिकित्सकलाई देखाई औषधि सेवन गरेमा पूर्ण निको हुन्छ ।
दिसा गर्दा मासुको डल्लो बाहिर निस्कन्छ र दिसा गरिसकेपछि आफैं भित्र जान्छ । दुख्ने र रगत आउने समस्या पनि हुन्छ । यस अवस्थासम्मको पाइल्सलाई आयुर्वेद औषधि सेवन गराएर निको पार्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अलि लामो समय औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
दिसा गर्दा मासुको डल्लो बाहिर निस्कन्छ तर आफैं भित्र पस्दैन । साथै धेरै दुख्ने र रगत बग्ने गर्छ । यस अवस्थाको पाइल्समा क्षार सुत्र विधिद्धारा उपचार गर्नुपर्छ ।
यो अवस्थामा मासुको डल्लो बाहिर नै बसिरहन्छ । अत्यधिक दुखाइसँगै मलद्धारबाट रगत बग्छ । समयमा उपचार नभएमा संक्रमण भई सम्पूर्ण शरिरमा फैलनसक्छ र रोगीको मृत्युसमेत हुनसक्छ । रोगले धनि ,गरिब, ठूलो सानो केही भन्दैन । त्यसैले खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ र समयमा नै उपचार गर्न जरुरी हुन्छ ।
पेटको अग्नीलाई मजबुत गराउने
कब्जियत हटाउन कब्जियत नासक औषधि सेवन गर्ने
बढी मात्रामा झोलिला पदार्थ, रेशादार खानामा जोड दिने
पर्याप्त सागसब्जी, ग्रिन सलाद र मौसमी ताजा फलफूल सेवन गर्ने
आयुर्वेदमा ‘निदानम परिबर्जनम’ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर रोग लाग्ने कारण हटाएमा रोग आफैं हट्न सक्छ । कब्जियत हुन नदिन खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ । फास्टफूड र जंक फूडको सेवन गर्न गर्न हुँदैन । घरमा बनाएको ताजा, स्वच्छ, सफा खाना खानुपर्छ । रोग लागिसकेपछिको अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आवश्यक उपचार शुरु गर्नुपर्छ । इन्टरनल पाइल्समा औषधिको सेवनबाट रोग निको हुनसक्छ । तर एक्सटर्नल पाइल्समा क्षार सुत्रबाट उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
क्षार सुत्र के हो ?
सामान्य भाषामा क्षार भनेको अल्काली औषधि हो, सुत्र भनेको धागो हो । स्टेरलाईज प्रविधिबाट औषधि दलेर मेडिकेटेड बनाइको धागो क्षार सुत्र हो । क्षार सुत्र आयुर्वेदको क्षेत्रमा एक सफल, बहुउपयोगी, सरल वैज्ञानिक, साइड इफेक्टरहीत, दीर्घकालीन एवं प्रभावकारी शल्यकर्म (सर्जिकल प्रोस्युडर) मानिन्छ । जसमा मुख्यतः औषधीय गुणले भरिपूर्ण जडिबुटीहरुबाट तयार पारिएको क्षारलाई वारवोलिन धागोमा लेप गरी सोही माध्यमबाट शल्यक्रिया गरिन्छ । यसमा सोधन, लेखन र रोपण जस्ता प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
आधुनिक शल्यकर्मको तुलनामा न्यूनतम तन्तुको क्षय
रगत चढाउनु नपर्ने
बिरामीलाई बेहोस बनाउन नपर्ने
अस्पतालमा भर्ना भएर बस्न नपर्ने
खर्च धेरै नलाग्ने
संक्रमणको जोखिम कम हुने
बारम्बार समस्या नदोहोरिने
मल मुत्रादीको सम्भावना नरहने
शल्यक्रिया गरेपछि बिरामीले बेडरेष्ट नगरी तुरुन्तै आफ्नो सबै काम गर्न सकिने